Ciise Dhalashada kahor, Kaniisada Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Miyuu jiray Ciise kahor dhalashadiisa? Yuu ahaa ama muxuu ahaa Ciise kahor intuusan aadanin? Miyuu ahaa ilaahii Axdiga Hore? Si loo fahmo cidda Ciise yahay, waa inaan marka hore fahanno waxbarista aasaasiga ah ee Saddexanka Fahamka (Trinity). Baybalku wuxuu barayaa in Eebbe mid yahay oo uu qudha yahay. Tani waxay noo sheegaysaa in qof kasta ama wixii Ciise ka hor intuusan bini-aadam noqonnin uusan noqon karin Ilaah gooni ka ahaada Aabbaha. In kasta oo Ilaah uu yahay abuur, wuxuu weligiis ku jiray saddex qof oo isku mid ah oo weligood jira oo aan u aqaanno Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Si loo fahmo sida wax u dhigista masiixiyaddu u qeexeyso dabeecadda Eebbe, waa inaan maskaxda ku hayna faraqa u dhexeeya ereyada ahaanta iyo qof ahaanta. Farqiga waxaa loo muujiyay sida soo socota: Waxaa jira shay oo kaliya oo Eebbe leeyahay (yac ahaan), laakiin waxaa jira saddex kuwaas oo ka dhex jira hal Ilaah, oo ah, saddexda qof ee rabaani ah - Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah.
Jiritaanka aan u naqaanno hal Ilaah wuxuu xiriir weligiis ku dhex jiraa aabihiis ilaa cunugga. Aabuhu waligiis wuxuu ahaa aabaha sidoo kale wiil waligiis wiil buu ahaa. Dabcanna Ruuxa Quduuska ahi had iyo goor wuxuu ahaa Ruuxa Quduuska ah. Hal qof oo ilaahnimadiisa kama hor marin kan kale, ama qof hal dabeecad ka hooseeya midka kale. Dhammaan saddexda qof - Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah - waxay wadaagaan hal Ilaah. Caqiidada masiixiga waxay sharxaysaa in ciise uusan abid loo abuurin ka hor intuusan aadanuhu bilaabin, laakiin wuxuu weligiis jiray sidii ilaahay weligiis.
Markaa waxa jira saddex tiir oo fahansi ah oo ah Saddex-geesnimada dabeecadda Eebbe. Marka hore, waxaa jira hal Ilaah oo run ah, oo ah Rabbiga (YHWH) ee Axdigii Hore ama Theos of Axdiga Cusubi waa - Abuuraha wax kasta oo jira. Tilmaanta labaad ee baridani waa in Ilaah ka kooban yahay saddex qof, oo ah Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aabbuhu ma aha wiilka, wiilku ma aha aabbaha ama Ruuxa Quduuska ah, iyo Ruuxa Quduuska ah ma aha aabbaha ama wiilka. Tiirka seddexaad wuxuu noo sheegayaa in sedexdaani ay kala duwan yihiin (laakiin midba midka kale ha ka soocay), laakiin si siman u wada wadaaga hal ilaah, Ilaah, iyo in ay weligood jiraan, isle'eg yihiin oo isku dabiici yihiin. Sidaa darteed Ilaah waa mid jira iyo mid ahaanshaha, laakiin isagu wuxuu ku jiraa saddex qof. Waa inaan had iyo jeer ka taxadarnaa in aaysan u fahmin dadka ilaahey sida dadka ku jira boqortooyada aadanaha, halkaasoo hal qof gooni looga soocayo.
Waxaa la aqoonsan yahay inay jiraan wax kusaabsan Trinity sida Eebbe oo dhaafsiisan fahamka aadanaha xadidan. Qorniinku nooguma sharixin sida ay suurta gal u tahay in hal Ilaah uu jiri karo sida Saddexmidnimo. Kaliya waxay cadeyneysaa in taasi tahay kiiska. Xaqiiqdii, waxay umuuqataa in ay adagtahay inagu insaanka ah inaanu fahanno sida aabaha iyo wiilku ay u noqon karaan hal jir. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah inaan maanka ku hayno kala duwanaanshaha u dhexeeya qofka iyo ahaanshaha barashada barista Saddexanka. Kala soociddani waxay noo sheegaysaa in uu jiro kala duwanaansho u dhexeeya sida uu Ilaahay mid yahay iyo habka uu saddex yahay. Marka si fudud loo dhigo, Ilaah waa mid ahaansho iyo saddex qofba. Haddii aan maskaxda ku hayno kala-soockan inta lagu gudajiro wadahadalkeenna, waan ka fogaan doonnaa waxa muuqda (laakiin runtii ma aha) is burinaya ee runta kitaabiga ah ee ah in Ilaah uu ku jiro saddex qof - Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah - in lagu jahwareero.
Tilmaanta jir ahaaneed, in kasta oo midda aan dhammaystirnayn, ay ina hoggaamiso fahan wanaagsan. Waxaa jira hal nal daahir ah - iftiinka cad. Laakiin nalka cad wuxuu u kala jabin karaa seddex midab oo waaweyn - casaan, cagaar iyo buluug. Mid kasta oo ka mid ah saddexda midab ee ugu waaweyn kama-soocna midabyada kale ee waaweyn - waxa lagu soo daray hal iftiin, caddaan. Waxaa jira kaliya hal nal oo hagaagsan, oo aan ugu yeernno iftiin cad, laakiin iftiinkaan waxaa ku jira seddex kala duwan laakiin aan ku kala duwaneyn midabada waaweyn.
Sharaxaadda kor ku xusan waxay ina siineysaa aasaaska aasaasiga ah ee Saddexanka, kaasoo ina siinaya aragtida si aan u fahamno cidda ama wuxuu Ciise ahaa ka hor intuusan aadanuhu noqon. Markaan fahamno xiriirka weligiis ku dhex jiray hal Ilaah keliya, waxaan u sii gudbi karnaa jawaabta su'aasha ah cidda Ciise uu ahaa ka hor intuusan nin noqon iyo dhalashadiisa jir ahaaneed.
Nooca weligiis ah ee Ciise iyo jiritaankiisa hore ee Injiilka Yooxanaa
Jiritaanka Masiixu wuxuu si cad loogu sharaxay Yooxanaa 1,1: 4-1,2. Bilowgii waxaa jiray Ereyga, Ereyguna wuxuu la jiray Ilaah, Ilaahna wuxuu ahaa Ereyga. 1,3 Isagu Ilaah buu la jiray bilowgii. 1,4 Wax walba waa la sameeyay, oo isla markaasna aan la samayn karin. 14 Noloshu way ku jirtay isaga…. Waa ereygan ama sumadda Giriigga ku noqotay nin ku jira Ciise. Aayadda: Ereyguna jidh buu noqday oo wuu ina dhex joogay…
Erayga weligiis ah, ee aan la abuurin kaasoo ahaa Ilaah, oo weli ah sida mid ka mid ah shakhsiyaadka Ilaah, wuxuu la jiray Ilaah inuu noqday bini aadam. Xusuusnow in Ereygu Ilaah ahaa oo uu noqday bini-aadam. Ereyga waligiis ma uusan soo gaarin, taasi micnaheedu waa eraygu ma uusan noqon. Isagu had iyo goor wuxuu ahaa Ereyga ama Ilaah. Jiritaanka eraygu waa mid aan dhamaad lahayn. Waligeedba way jirtay.
Sida uu Donald Mcleod ku sharaxayo Shakhsiga Masiixa: Waxaa loo diraa sidii mid horey u jiray, oo aan ahayn midka soo gala isagoo la soo diray (P. 55). Muuqaalka wuu sii socdaa: Axdiga Cusub dhexdiisa, jiritaanka Ciise waa sii wadis jiritaankiisii ​​hore ama jiritaankiisii ​​hore isagoo ahaanshaha jannada. Ereygii dhex degganaa wuxuu la mid yahay eraygii Ilaah la jiray. Masiixa oo laga helay nin nin ayaa ah kan hore u jiray oo Ilaah uumay (P. 63). Waa Erayga ama Wiilka Ilaah ee aqbalaa jidhka, ma aha Aabaha ama Ruuxa Quduuska ah.
Axdiga Hore dhexdiisa, magaca ugu caansan Eebbe waa Yahweh, oo ka timaada ereyada Cibraaniga ee YHWH. Isagu wuxuu ahaa magaca reer binu Israa'iil ee Ilaah, weligiis, abuurkiisa waligiis. Muddo kadib, Yuhuuddu waxay u arkeen magaca Ilaah, YHWH, inuu yahay mid qaddarin badan oo hadli kara. Erayga Cibraaniga ah adonai (sayidkayga) ama Adonai, ayaa loo isticmaalay halkii. Sidaa darteed, tusaale ahaan, Kitaabka Quduuska ah ee Luther ereyga Rabbiga (xarafyada waaweyn) halka uu YHWH ka muuqdo buugaagta Cibraaniga. Rabbiga waa magaca ugu caansan Eebbe ee ku jira Axdiga Hore - waxa loo adeegsaday in ka badan 6800 jeer marka loo eego isaga. Magaca kale ee Eebbe ku jira Axdiga Hore waa Elohim, kaas oo loo adeegsaday in ka badan 2500 jeer, sida weedha ah Eebbe, oo ah Rabbiga (YHWHElohim).
Waxa ku dhex yaal buugaag badan oo ku qoran Axdiga Cusub halkaas oo qorayaashu tixraac ka bixiyaan hadalo loo soo jeedinayo xagga Rabbiga Axdiga Hore. Dhaqankan qorayaasha Axdiga Cusubi waa wax caadi ah oo aynu seegno muhiimaddiisa. Markay Yehowah dhigayaan Qorniinka Ciise, qorayaashani waxay tilmaamayaan inuu Ciise yahay Rabbiga ama Ilaah noqday bini-aadan. Dabcan, ma la yaabno in qorayaashu ay isbarbar dhigaan maxaa yeelay Ciise laftiisu wuxuu sharxay in marinnada Axdiga Hore loola jeedo isaga (Luukos 24,25-27; 44-47; Yooxanaa 5,39-40; 45-46).
Ciise waa ego Eimi
Injiilka Yooxanaa, Ciise wuxuu xertiisii ​​ku yidhi: Hadda waxaan idinku leeyahay intaanay dhicin kahor, in markay dhacdo, aad rumaysan tahay inuu yahay (Yooxanaa 13,19). Oraahda aan anigu ahay waa tarjumaadda egoka Giriigga eimi. Weedhani waxay ku dhacdaa 24 jeer Injiilka Yooxanaa. Ugu yaraan toddobo ka mid ah weedhan ayaa loo arkaa inay yihiin kuwa dhammaystiran maxaa yeelay kuma raacin weedh sida Yooxanaa 6,35 waxaan ahay kibista nolosha. Toddobadaas arrimood ee gundhigga ah ma jiro weedh xukun oo aniga waxaan ahay dhamaadka jumladda. Tani waxay ina tusinaysaa inuu Ciise u adeegsaday weedhan magac ahaan si uu u muujiyo cidda uu yahay. Toddobada lambar ayaa ah Yooxanaa 8,24.28.58:13,19, 18,5.6:8;; iyo.
Haddii aan dib ugu noqonno Ishacyaah 41,4: 43,10; 46,4 iyo, waxaan u adeegsan karnaa asalka tixraaca Ciise naftiisa ee naftiisa eimi (WAA INAAD) arki Injiilka Yooxanaa. Ishacyaah 41,4: 43,10 Ilaah ama Rabbigu wuxuu leeyahay, Aniga, aniga Rabbiga ah, kan ugu horreeya iyo kan ugu dambeeyaba, Ishacyaah wuxuu dhahay: Aniga ayaa Rabbiga ah, markii dambena waxaa la yidhi, Waxaad tihiin markhaatiyaashaydii, ayaa Rabbigu leeyahay, oo aniguna waxaan ahay Ilaah (V. 12). Ishacyaah 46,4 Ilaah ayaa tilmaamaya (Sayidow) isu soo jeeso sida anoo kale.
Oraahda Cibraaniga ah waxaan ahay waxay ku jirtaa qaybta Giriigga ee Qorniinka Quduuska ah, Septuagint (oo ay rasuulladu adeegsadeen) Ishacyaah 41,4: 43,10; 46,4 iyo waxaa lagu tarjumay weedha ego eimi. Waxay u muuqataa inay iska cadahay inuu Ciise sameeyay aniga waxaan ahay odhaahyada isaga oo tixraac ka bixinaya naftiisa maxaa yeelay waxay toos ula joogaan Ilaah (Rabbiyow) hadalada ku saabsan naftaada ee Ishacyaah. Runtii, Yooxanaa wuxuu yidhi Ciise wuxuu yidhi in Eebbe jidh ku jiro (Qoraalka Yooxanaa 1,1.14, oo soo bandhigaya injiilka oo ka hadlaya ilaahnimadiisa iyo isu-ekaanta ereyga, ayaa noo diyaariya xaqiiqadan).
Johannes 'ego eimi (Anigu waxaan ahay) Aqoonsiga ciise sidoo kale dib ayaa looga raadsan karaa Baxniintii 2, halkaasoo Ilaah isku tilmaamay inuu yahay aniguna. Halkaas waxaan ka aqrinaynaa: Ilaah [Cibraaniga Cibraaniga ah] wuxuu ku yidhi Muuse: WAA INAAN YAHAY WAAN AHAAN [a. . Aniga ayaa ahay Oo wuxuu yidhi, Waxaad reer binu Israa'iil ku tidhaahdaa, Anigu waxaan ahay, Isagaa kuu soo kaa diray. (V. 14). Waxaan aragnay in Injiilka Yooxanaa uu xidhiidh cad ka dhexeeyo Ciise iyo Rabbiga, magaca Eebbe ee Axdiga Hore. Laakiin sidoo kale waa inaan ogaano in John uusan u ekaysiin Ciise aabaha (sida Injiillada kale ma yeelaan). Tusaale ahaan, Ciise wuxuu tukanayaa Aabbaha (Yooxanaa 17,1-15). John wuu fahmay in wiilku ka duwan yahay aabaha - oo waliba wuxuu arkaa in labadooduba ay ka duwan yihiin Ruuxa Quduuska ah (Yooxanaa 14,15.17.25: 15,26). Maaddaama ay sidaas tahay, aqoonsiga Yooxanaa inuu Ciise yahay Eebbe ama Rabbiga (markaan ka fikirno Cibraanigiisa, magaca Axdiga Hore), sharraxaad Saddex-geesood ah oo xagga dabeecadda Ilaah ah.
Aynu mar kale taas mar kale galno maxaa yeelay waa muhiim. Yooxanaa waxa uu ku celcelinayaa aqoonsigii Ciise ee ahaa in aan ahay AMA Axdiga Hore. Maaddaama ay jiraan hal Ilaah kaliya iyo Yooxanaa ayaa fahmay tan, waxaan kaliya oo ku soo gabagabeyn karnaa inay jiraan labo qof oo wadaaga midnimada Ilaah (Waxaan aragnay inuu Ciise, Wiilka Ilaah ka duwan yahay Aabaha). Iyada oo Ruuxa Quduuska ah, oo sidoo kale uu ka wada hadlay John cutubyada 14-17, waxaan u leenahay aasaaska Saddexda. Si aan u kala qaadno shaki kasta oo ku saabsan aqoonsiga Yooxanaa ee Ciise xagga Rabbiga, waxaan soo qaadan karnaa Yooxanaa 12,37: 41, halkaasoo ay ku leedahay:
Isaguna wuxuu calaamooyinkuu oo dhan hortooda ku sameeyey, laakiinse ma ay rumaysan isaga, siduu yahay nebi Isayos oo uu ku hadlay, Rabbiyow, yaa warkayagii rumaystay? Oo yaa gacantii Rabbiga loo muujiyey? 12,38 Sidaa aawadeed way rumaysan kari waayeen, maxaa yeelay, Ishacyaah mar kale buu yidhi: 12,39. 12,40 Markaasuu indhahooda indhooday oo qallafsanaaday, si aanay indhaha wax ugu arkin, oo aanay wax garan, oo qalbiga ugu beddelmin, . " 12,41:53,1 Isayos wuxuu yidhi, maxaa yeelay, ammaantiisuu arkay wuuna ka hadlay isaga. Oraahyada kor ku xusan ee Yooxanaa adeegsaday wuxuu ka yimid Ishacyaah 6,10 iyo. Nebigu asal ahaan wuxuu sheegay ereyadan isaga oo tixraacaya YHWH. Yooxanaa wuxuu leeyahay wixii Ishacyaah runtii arkay wuxuu ahaa ammaanta Ciise iyo inuu ka hadlay isaga. Haddaba rasuulkii Yooxanaa, Ciise jidh buu Rabbi ku ahaa; intuusan dhalan kahor wuxuu caan ku ahaa Rabbiga.
Ciise waa Sayidkii Axdiga Cusubi
Mark ayaa bilaabaya injiilkiisa isagoo leh waa injiilka Ciise Masiix "Wiilka Ilaah" (Mark 1,1). Ka dib wuxuu ka soo xigtay Malachi 3,1: 40,3 iyo Ishacyaah 1,3: 40,3 ereyadan soo socda: Sida ku qoran kitaabka nebi Ishacyaah: "Bal eeg, waxaan hortaada u dirayaa wargeeyahayga, Kan jidkaaga diyaargarayn doona." «XNUMX Waa codka wacdin ah oo cidlada jooga, Jidka Rabbiga hagaajiya, Fuulna ha sara joogtee.». Dabcan, Sayidku Ishacyaah waa Rabbiga, waana magaca Ilaaha reer binu Israa'iil.
Sida kor ku xusan, Mark ayaa soo xiganaya qaybta hore ee Malachi 3,1: Bal eeg, waxaan rabaa inaan u diro farriinteyda inuu jidka ii diyaariyo (rasuulku waa Yooxanaa Baabtiisaha). Xukunka soo socda ee Malachi waa: Oo waxaan dhowaan iman doonnaa macbudkiisa Rabbiga aad dooneysid; Oo bal eeg, malaa'igtii axdigii aad jeclayd ayaa bal eeg, waa imanayaa. Rabbigu waa dabcan Rabbiga. Markuu soo xiganayo qaybta koowaad ee aayaddan, Mark wuxuu muujinayaa in Ciise yahay dhammaystirka wixii Malaakii ku yidhi Rabbiga. Mark wuxuu ku dhawaaqay injiilka, kaas oo ah in Sayidku Sayidku u yimid sidii malaa'igta axdiga. Laakiin Mark ayaa yidhi, Rabbigu waa Ciise Masiix.
Laga soo bilaabo Rooma 10,9: 10-13 waxaan fahamsanahay inay Masiixiyiintu qirayaan inuu Ciise yahay Sayid. Macnaha guud ee aayadda 2,32aad wuxuu si cad u muujinayaa in Ciise yahay Rabbiga, oo ay tahay in dadka oo dhami ay u yeeraan si ay u badbaadaan. Bawlos wuxuu soo xiganayaa Yooxanaa inuu xoogga saarayo markan: Qof kasta oo ku barya magaca Rabbiga waa la badbaadi doonaa (V. 13). Haddaad akhrinaysid Yoo'eel 2,32, waxaad arki kartaa in Ciise uu ka soo xigtay aayaddan. Laakiin marinka Axdiga Hore ayaa sheegaya in badbaadadu ay u timid dhammaan kuwa ku barya magaca Rabbiga - magaca rabaani ah ee Ilaah. Bawlos, dabcan, waa Ciise kan aan ugu yeedhnay inuu badbaadiyo.
Filiboy 2,9: 11-43,23 waxaan akhrinaa in Ciise leeyahay magac ka sarreeya magacyada oo dhan, in magiciisa oo dhan jilbaha lagu wada sujuudo, iyo in afafka oo dhami ay qiran doonaan in Ciise Masiix yahay Sayid. Bawlos wuxuu cadeeyay bayaankan Ishacyaah, halkaas oo aan wax ku aqrino kuwa soo socda: Waxaan dhaaratay nafsaddayda, oo xaqnimuna way ka soo baxday afkayga, waana eray aan sii jiri doono. waxaad dhahdaa: Rabbiga ayaan xaqnimo iyo xoog leeyahay. Macnaha guud ee Axdiga Hore, kanu waa Rabbiga ah Ilaaha reer binu Israa'iil oo isagu ka hadla. Isagu waa Sayidka dhaha: Haddii kale aniga mooyee ilaah kale ma jiro.
Laakiin Bawlos kama labalabeyn inuu dhaho jilbaha oo dhan buu u sujuudi Ciise iyo afafka oo dhan ayaa isaga qiran doona. Maaddaama Bawlos kaliya rumeysan yahay hal Ilaah, waa inuu bartey Ciise barbar dhigaa Rabbiga. Midbaa laga yaabaa inuu weydiiyo su’aasha: haddii Ciise uu Rabbiga ahaa, meeduu aabbaha ku jiray Axdigii Hore? Xaqiiqdu waxay tahay, marka loo eego fahankeenna Saddex-geesoodka ah, aabaha iyo wiilkuba waa Rabbiga Eebbe, waayo waa Ilaah (sida Ruuxa Quduuska ah). Dhamaan seddexda qof ee ilaahnimada - Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah - waxay wadaagaan hal ilaah iyo hal magac oo rabaani ah, oo la yiraahdo Ilaah, Theos ama Rabbiga.
Warqadda Cibraaniyada waxay ku xireysaa Ciise xagga Rabbiga
Mid ka mid ah bayaanada ugu cad ee Ciise la leeyahay Rabbiga, Ilaaha Axdiga Hore, waa Cibraaniyada 1, gaar ahaan aayadaha 8-12. Aayadaha ugu horreeya ee Cutubka 1aad waxay si cad u muujinayaan in Ciise Masiix, yahay Wiilka Ilaah, uu yahay mawduuca (V. 2). The God the the the God God God God the the the the the the God God God God God God God the God the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the God God God God the [God the [God God God God God the God God Ilaah wuxuu dunida ku abuuray dunida (Wiilkiisa) oo wuxuu ka dhigay mid dhaxalka wax walba leh (V. 2). Wiilku waa ka tarjumaadda sharaftiisa iyo sumcadda dabeecadiisa (V. 3). Wax walbana ereygiisa xoog buu ku qaadaa (V. 3).
Ka dib markaan akhrino kuwa soo socda aayadaha 8-12:
Laakiin wuxuu ka yimid wiilkii: "Ilaahow, carshigaagu weligiis iyo weligiisba, Oo usha xaqnimadaadana waa usha boqortooyadaada. 1,9 Adigu xaqnimada waad jeclayd, oo caddaaladana waad necbayd, oo sidaas daraaddeed, Ilaahow, Ilaahaagu wuxuu kuugu subkay saliid farxaddaada la mid ah oo caynkan oo kale ah. 1,10:1,11 Oo: «Adigu, Rabbiyow, bilowgii dhulkaad aasaastay, Samooyinkuna waa shuqullada gacmahaaga. 1,12:1 Iyagu way idlaan doonaan, adiguse waad sii jiri doontaa. Dhammaantood waxay ku gaboobi doonaan sidii khamiis oo kale, ISHACYAAH 102,5:7 Oo waxaad u kala bixi doontaa sida dhar oo kale, Oo waxay u beddelmi doonaan sida dhar oo kale, Laakiin adigu isku mid baad tahay sannadahaaguna ma dhammaan doonaan. Marka hore, waa inaan ogaano in maadada Cibraaniga 102 ay ka timid dhowr heesood. Cutubka labaad ee xulashada waxaa laga soo xigtay Sabuurka. Qoraalkan ku jira Sabuurrada ayaa tixraac cad u ah Rabbiga ah, Ilaaha Axdiga Hore, Abuuraha wax kasta oo jira. Runtii, Sabuurrada oo dhami waxay ku saabsan yihiin Rabbiga. Laakiin warqaddii Cibraaniyada waxay adeegsanaysaa agabkan Ciise. Waxa kaliya oo jira gabagabo macquul ah: Ciise waa Ilaah ama Rabbiga.
U fiirso ereyada kujira farqadda. Waxay muujinayaan in Wiilka, Ciise Masiix, loogu yeedhay Ilaah iyo Sayidkaba Cibraaniyada 1. Waxaan sidoo kale aragnay in xiriirkii Rabbiga ee lala yeeshay uu ahaa, Ilaahow, Ilaahaaga. Sidaa darteed, labaduba qofka wax ku dara ama qofka wax iibsada waa Ilaah. Sidee ayay noqon kartaa maadaama uu jiro hal Ilaah oo keliya? Jawaabta, dabcan, waxay kujirtaa cadeynteenna Saddex-geesnimada. Aabuhu waa Ilaah, wiilkuna waa Ilaah sidoo kale. Iyagu waa laba ka mid ah saddexda qof ee qof ahaaneed, Ilaah ama Rabbiga af Cibraaniga ku hadla.
Cibraaniyada 1 ayaa Ciise u muujinaya inuu yahay abuuraha iyo daryeelaha adduunka. Isaga ayuu sii joogayaa (V. 12), ama waa mid fudud, taasi waa, nuxurkeedu waa weligiis. Ciise waa u ekaanshaha dabeecadda Eebbe (V. 3). Sidaa darteed, waa inuu sidoo kale ahaadaa Ilaah. La yaab malahan in qoraaga warqad u ah Cibraaniyada uu qaadan karo qaybo in Ilaah (Rabbi) oo u gudbiyey Ciise. James White, ee ku yaal Maskax-ka ilaaway ee bogagga 133-134, wuxuu u dhigayaa sidan:
Qoraa Warqadda ee Cibraaniyada wax muujinaya wax caqabad ah ma leh iyada oo laga soo qaadanayo aayaddan Psalter - marinka ku habboon oo keliya in lagu sharraxo Abuuraha weligiis ah ee Eebbe laftiisa - oo tixraacaya Ciise Masiix ... Muxuu ula jeedaa in qoraaga Buuggu Cibraanku leeyahay mid Miyaad qaadan kartaa marin ku habboon oo loo adeegsan karo oo keliya oo markaas la xiriiri kara Wiilka Ilaah, Ciise Masiix? Waxaa loola jeedaa inaysan wax dhibaato ah ku aragin sameynta aqoonsigaas sababtoo ah waxay rumeysan yihiin in wiilku runtii ahaa abuurkii Rabbiga.
Jiritaanka Ciise ee qoraallada Butros
Aynu eegno tusaale kale oo ah sida Qorniinka Axdiga Hore u barbar dhigo Ciise xagga Rabbiga, Rabbiga ama Ilaaha Axdiga Hore. Rasuul Butros wuxuu magacaabay Ciise, Dhagaxii nool oo ay dadku diidaan, laakiin Ilaah doortay oo qaali ah (1 Butros 2,4). Si loo muujiyo inuu Ciise yahay dhagaxan nool, wuxuu soo xiganayaa saddexda qaybood ee soo socda ee Qorniinka:
Bal eega, waxaan Siyoon dhex dhigay rukun la doortay oo qaali ah. Ku alla kii isaga rumaystaa ma ceeboobi doono. 2,7 Kuwa rumeeysan waa qaali; gaalada, si kastaba ha noqotee, "Dhagaxii ay wax dhisayaashu diideen oo noqday geeska geeska 2,8 waa dhagarta doodda iyo dhagarta xanaaqa"; Way ku soo dhacaan, maxaa yeelay iyagu waxay rumaysan waayaan erayga, taas oo ah waxa looga jeedo inay sameeyaan (1 Butros 2,6: 8).
Erayada ayaa ka yimid Ishacyaah 28,16:118,22, Sabuurradii 8,14: 8,14 iyo Ishacyaah 8,14. Xaaladaha oo dhan, odhaahdu waxay tixraacaan Sayidka, ama Rabbiga, macnaha guud ee Axdigii Hore. Tusaale ahaan, Ishacyaah Eebbe wuxuu leeyahay: laakiinse la hadal Rabbiga ciidammada. ha noqotee cabsidaada iyo cabsidaada. Oo labada reer binu Israa'iil waxay u noqon doonaan baabba 'iyo meel lagu turunturoodo iyo dhagax weyn oo xanaaq badan, oo dadka Yeruusaalem degganna waxay u noqon doonaan dhac iyo haybad. (Ishacyaah 8,13: 14).
Peter, iyo qorayaasha kale ee Axdiga Cusub, Ciise waa in lala simo Rabbigii Axdiga Hore - Rabbiga ah Ilaaha reer binu Israa'iil. Rasuul Bawlos wuxuu sidoo kale soo xiganayaa Ishacyaah 8,32:33 ee Rooma 8,14 si uu u muujiyo in ciise uu yahay dhagaxa ay Yuhuudda cajiibka ahi ku turunturoodeen.
Wixii qorayaasha Axdiga Cusub, Rabbiga ah dhagaxa reer binu Israa'iil, wuxuu nin ku noqday Ciise, oo ah dhagaxii weynaa ee Kaniisadda. Siduu Bawlos uga hadlay Ilaaha reer binu Israa'iil: Dhammaantoodna waxay wada cuneen isku cunto qudha, kulligoodna waxay wada cabbeen isku cabbid ruuxi ah; waayo, waxay ka cabbeen dhagaxa ruuxa ah oo raacday; laakiin dhagaxii wuxuu ahaa Masiixa.